မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): ကျတ်​ကုန်းသို့ အ​ခေါ်အခံရသူ
တစ်ခါတုန်းက ကျွန်မတို့ နဲ့ ရွာချင်းကပ်ရက်က ရွာတစ်ရွာမှာ ဒေါ်သိန်းမေ ဆိုတဲ့ လက်သည် အပျိုကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ် ကလေးမွေးပေးယုံတင်မကဘူး ကလေးဖျက်တဲ့အလုပ်ကိုပါလုပ်တယ်တဲ့။ တစ်ည မိုးတွေအရမ်းရွာနေတဲ့ ညတစ်ည သူတို့အိမ်ကို အမျိုးသား၂ယောက် နွားလှည်းနဲ့ ကလေးမွေးပေးဖို့ အကူညီလာတောင်းတယ်။ အပျိုကြီးရဲ့ အမေက မိုးကလဲရွာ ညဉ့်ကလဲ အရမ်းနက်နေပြီဆိုတော့ နောက်မသိတဲ့ သူစိမ်းယောက်ျားနှစ်ယောက်ကလဲဖြစ်နေပြန်တော့ မလိုက်သွားဖို့ ၀င်တားတယ်။
အဲ့ဒါပေမယ့် ယောကျာ်းလုပ်သူ လို့ထင်ရတဲ့ လူတစ်ယောက်က အတင်းတောင်းပန်ပြီး သူ့မိန်းမ တကယ်ဗိုက်အရမ်းနာနေလို့ပါ ရှစ်ကြီးခိုးပါရဲ့ ကလေးမွေးပြီးပြီးချင်း ချက်ချင်းပြန်ပို့ပေးပါ့မယ် အကြိမ်ကြိမ် တောင်းပန်တာကြောင့် အပျိုကြီးလဲ သနားပြီး မိုးရွာထဲသူတို့ ခေါ်တဲ့နောက်ကို နွားလှည်းစီးပြီးလိုက်လာလိုက်တယ် အဲ့ယောကျာ်းနှစ်ယောက်ဦးဆောင်မှုနဲ့ နှစ်ထပ်အိမ်မဲကြီးတစ်လုံးထဲရောက်တော့ မီးတွေက လင်းထိန်နေတာပဲ အပျိုကြီးကို ဧည့်ခန်းမှာ ခဏထိုင်ခိုင်းပြီး မုန့်တွေကျွေးတယ် အပျိုကြီးလဲ သူတို့ကျွေးတဲ့မုန့်ကအရသာကလဲကောင်း မစားဘူးတဲ့မုန့်တွေဆိုတော့ အငမ်းမရစားပစ်လိုက်တာ အကုန်ပဲ။ နောက်မှ ကလေးမွေးဖို့ အခန်းထဲကိုဝင်သွားပြီး ဗိုက်နာလို့အော်နေတဲ့မိန်းမကို ဗိုက်ကိုသေချာစမ်းပြီး နှိပ်ပေးနေတာ အတော့ကို မွေးရခက်နေတော့ ဗိုက်ကို နှိပ်ပြီးကလေးကို အမျိုးမျိုးပြင်နေရတာပေါ့ အချိန်ဘယ်လောက်တောင်ကြာသွားလဲတော့မသိဘူး ။
မနက်လယ်ထဲဆင်းလာတဲ့ ရွာသားတွေ သင်္ချိုင်းက ဖြတ်အသွား အပျိုကြီး ..သင်္ချိုင်းထဲက မြေပုံကြီးကို လက်နဲ့ ကလေးမွေးပေးသလိုနှိပ်ပေးနေတာ တွေ့တော့ ပိာတ်! အပျိုကြီး အဲ့ဒါဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတော့ ချက်ချင်းနှိပ်နေတာရပ်ပြီး မေ့လဲသွားတယ်။ ရွာသားတွေလဲ သူ့အိမ်ကို ၀ိုင်းသယ်လာပေးပြီး ပြုစုပေးတော့ သတိပြန်လည်လာတယ် အဲ့တော့မှ သူညကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကို အကုန်ပြောပြပြီး နောက်တစ်ခေါက်ပြန်မေ့လဲသွားလိုက်တာ အသက်ပါ တစ်ခါထဲပါသွားပါလေရော။ လူကြီးတွေပြောပြတာတော့ ကလေးဖျက်ချပေးတဲ့အကုသိုလ် အကျိုးပေးတာလို့ ပြောကြတယ် နောက်သူတို့ကျွေးတာကို စားလိုက်မိတော့ သူတို့ကအသက်နှုတ်လို့ ရသွားတာတဲ့.........
Author Maungssk at 3:22:00 PM